डाक्टर साब म बिबाहित युवती हुँ :श्री’मानकोले काम गर्दैन भन्ने थाहा पाएपछि मैले भाईसँगबाट सुटुक्क ब’च्चा बनाए, ब’च्चामा केही असर पर्छ की ? – ramechhapkhabar.com
डाक्टर साब म बिबाहित युवती हुँ :श्री’मानकोले काम गर्दैन भन्ने थाहा पाएपछि मैले भाईसँगबाट सुटुक्क ब’च्चा बनाए, ब’च्चामा केही असर पर्छ की ?
डाक्टर साब म ३७ बर्षीय बिबाहित युवती हुँ । सन्तानको रहर हामी दुवैमा औधी छ । बिबाह भएको १० बर्ष बित्यो । ब’च्चा नभएपछि श्रीमान् र मेरो दुवैको परिक्षण गर्दा श्रीमानको पक्षबाट पूर्ण रुपमा काम नगर्ने थहाँ भयो । यो कुरा डाक्टरले मलाई मात्र भन्नु भएको थियो । उहाँलाई औषधिले ठिक हुन्छ रे भनिदिए ।
त्यसपछि मैले त्यो थाहा पाएपछि आफ्नै भाईसँग सम्बन्ध राखेर ब’च्चा बनाए । पछि अनुहार फरक नआओस् र श्रीमानको परिवारले शंका नगरुन भनेर मेरो बुद्धिले यसो गरेकी हुँ । तर हाडनातामा ब’च्चा रहे सन्तान राम्रो नहुँने सुनेकी छु । मेरो भावी सन्तानमा केही समस्या आँउछकी भन्ने डर धेरै छ । क्रिपया जिज्ञासा मेटाईदिनुहोला । –श्रृष्टि
अब एउटै सन्ततीको सम्बन्धबाट ब’च्चा र त्यसबाट सन्तान उत्पादन कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । तर तपाईको केशमा भयो । भने यहाँ कस्ता असर जमाउछ भन्ने कुरामा म समान गोत्रमा देखिने समस्याका बारेमा उल्लेख गर्छु । तपाईको विषयसँग ठ्याक्कै मिल्नेछ ।वर्तमान जीव विज्ञान तथा सन्तान उत्पादनसँग सम्बन्धित विज्ञानले वताए अनुसार स्त्री को पेटमा ब’च्चा हुनका लागि मानव शरिरको विकास दुइटा सेलबाट सुरू हुन्छ । एक सेलमा २३ जोडी क्रो’मोजोम हुन्छन् ति मध्य एक सेल आमाबाट र एक सेल बुवाबाट आएका हुन्छन् अर्थात हाम्रो शरिरमा जम्मा ४६ वटा क्रो’मोजोम हुन्छन् ।